Vol. 2 DECEMBER, 1905. Tsia
Copyright, 1905, avy amin'ny HW PERCIVAL.
MISY fisainana fanombohana fahatelo ny quaternary fahatelo.
Vahaolana voalohany: fahatsiarovan-tena (aries), fihetsiketsehana (taurus), akora (gemini), fofonaina (homamiadana), dia mitoetra ao amin'ny tontolo noumenal. Ny quaternary faharoa: fiainana (leo), form (virgo), sex (libra), ary ny faniriana (scorpio), dia ny dingana amin'ny alàlan'ny fitsipika ny tontolo noumenal dia aseho ao amin'ny tontolo mahagaga. Ny tontolon'ny fahagola dia miseho amin'ny alàlan'ny fofonaina ary mifarana amin'ny maha-olombelona. Ny quaternary fahatelo, manomboka amin'ny fisainana, dia ahitana ny eritreritra (sagittary), ny maha-olona (capricorn), ny fanahy (aquarius) ary ny (pisces).
Satria ny fiainana no fiandohan'ny fizotran'ny vatana ho an'ny saina ivelany, dia noheverina koa fa ny fiantombohan'ny fizotran'ny vatana ny fahatsapana anatiny.
Ny eritreritra dia fahaizan'ny saina sy ny faniriana. Ny saina amin'ny alàlan'ny fofonaina dia mikofoka amin'ny vatana faniriana tsy niovaova ao amin'ny olombelona, ​​ary ny faniriana dia mipoitra toy ny faobe tsy misy endrika, mitambatra amin'ny fofonaina, omena endrika ary tonga saina.
Ny saina ihany no miditra amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny ivotoerana sasany. Ny toetran'ny eritreritra dia mety ho fantatry ny fiasan'ny foibe izay hidirany. Ny isa sy ny fampifangaroana eritreritra dia maro kokoa ary miovaova noho ireo olona an-tapitrisany izay niaviany, fa ny eritreritra rehetra dia mety ho voasokajy ao ambanin'ny loha efatra. Ireo dia firaisana ara-nofo, singa, ara-pihetseham-po ary ara-tsaina.
Manaitra sy miditra ao afovoany ny eritreritra momba ny firaisana ara-nofo ary, mihetsika ao amin'ny plexus solar ary mamporisika ireo taova eo amin'ny faritra kibo, dia miakatra tahaka ny fofonaina mafana ao am-po. Raha mahazo fidirana eo izy ireo dia mipoitra toy ny endrika tsy manavaka ao amin'ny tenda ary avy eo dia miditra ao an-doha izay omena azy ireo - mazava sy miavaka araka ny avelan'ny fivoaran'ny tsirairay. Rehefa mahatsapa famporisihana ao amin'ny faritra momba ny firaisana ny olona iray dia mety ho fantany fa misy fientanentanana sasany miasa aminy. Raha mandroaka na mamily ilay hevitra izy dia tsy tokony handà azy rehefa mangataka izany
Ny ambony dia mazava, eto ambany ny fiainana. Miova indray ny filaharana, ary ankehitriny, amin'ny alàlan'ny eritreritra maniry, ireo tontolon'ny fiainana sy endrika endrika, firaisana ara-nofo ary faniriana, ary nieritreritra ny tenany ihany, dia novaina alemoty ho hazavana. NY ZODIAC. miditra ao am-po, ary amin'ny alàlan'ny fahatsapana ao am-po ny fitiavana ilay olona izay ao anatin'ny ny vatana, na amin'ny fampodiana ny saina ho fahatsiarovan-tena avo indrindra izay azony tratrarina sy hampiantsoana ny fanatrehany. Ny fahatsapana dia ho lasa amin'ny faniriana sy fisandratana ary avy eo ny fandriampahalemana. Mora kokoa ny mampita eritreritra noho ny mampiala azy. Tsy eritreretina hovonoina ho faty toy ny inoana indraindray. Mety voaroaka izy io fa hiverina araka ny lalàna siklikana. Fa raha nolavina ny hanina isaky ny miverina dia ho simba tsikelikely izy ary hanjavona amin'ny farany.
Ny fiheverana natiora iray dia miditra ao amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny foitrany sy ny pores hoditra. Ny eritreritra saro-pady dia ny fahatezerana, ny fankahalana, ny lolompo, ny fialonana, ny faniriana, ny hanoanana ary ny hetaheta, ary ireo manaitaitra ireo taova dimy misy ny fahatsapana, toy ny fitsaram-borona, na mahita fahatsorana. Izy ireo dia mihetsika amin'ny plexus solar ary mandrisika ny hazavan'ny ody, miaraka amin'ny fakany ao afovoan-taovam-pananahana, ary ny rantsany ao amin'ny plexus solar, na milalao eo amin'io hazo ny sakany io, ny fakany ao amin'ny atidoha, misy sampana ao plexus solar.
Ireo eritreritra fototra ireo dia amboarina ary omena hery avy amin'ireo taova ao anaty kibony ary miakatra ao am-po avy amin'izay, raha mahazo sazy izy ireo dia miakatra amin'ny lohany, maka endrika voafaritra ary alefa avy amin'ny iray amin'ireo fisokafana toy ny maso na vava, raha tsy izany dia midina izy ireo, manelingelina ny vatana ary amin'ny fiantraikany amin'ny ataon'izy ireo rehetra, dia mahatonga azy ireo hamaly ny fihetsik'izy ireo. Izay hery mahery vaika na eritreritra ratsy izay mahita ny fidirana ao anatin'ny foitrana dia azo ovaina amin'ny alàlan'ny fampiasana ny saina miaraka amin'ny eritreritra voafaritra momba ny toetra hafa, na amin'ny fanovana ny hevitra ho amin'ny fitiavana tsy tia tena tahaka ny teo aloha; fa raha tsy izany, ny saina dia hohamafisina amin'ny alàlan'ny hery, omena endrika araka ny fahafahan'ny tsirairay mieritreritra, ary halefa eto amin'izao tontolo izao mba hanao zavatra amin'ny hafa izay hamela izany.
Ny fitrandrahana fihetseham-po maha-olombelona dia miditra ao am-po amin'ny alàlan'ny fisokafana sy foibe any an-tratra. Inona no eritreritra ara-pihetseham-po (antsoina hoe fihetseham-po indraindray), izay azo tsapain-tanana amin'ny alàlan'ny fijerena ny fihoaram-pefy azon'ny olona sasany amin'ny tsy fahitana ny fandatsahan-dra, na ny fahantrana na ny fijalian'ny hafa rehefa mifandray mivantana amin'ny fahantrana toy izany izy ireo, fa manadino momba izany raha vantany vao nanjavona ireo talanjona sy feo, avy eo ny mania ara-pinoana, ny toe-tsaina momba ny fifohazana, ny fahavitrihana hiady, ny fangorahana tsy marim-pototra ary ny fitaoman'ny vahoaka romotra. Araka ny toetoetran'ny fihetseham-po izay nidina avy tao am-po mankany amin'ny faritra ambany, na niakatra ary naka endrika tao an-doha ary natsangana ho tonga saina sy fahefana avo lenta. Ny karazan-kevitra sy fihetseham-po rehetra dia mitady fidirana ao an-doha satria ny loha no faritra ara-tsaina izay omena ny fahatsapana ary ny fiheverana mavitrika dia haverina sy haingoina. Ny loha dia manana varavarana fito: ny orony, vava, sofina ary maso, izay, miaraka amin'ny hoditra, dia miaiky tsirairay ireo singa dimy fantatry ny fahagola toy ny tany, ny rano, ny rivotra, ny afo, ary ny etera, izay mifanaraka amin'ny antsika. mamofona, manandrana, mandre, mahita, ary mampihetsi-po. Ireo singa sy zavatra manan-tsaina dia mihetsika na amin'ny alàlan'ireo fantsom-pahalalana ireo izay manomboka miasa na iray amin'ireo dimy asa ao an-tsaina. Ny fiasan'ny saina dimy dia miasa amin'ny alàlan'ny fahatsiarovan-tena dimy sy ireo taova fivezivezena rehetra ary izany no fizotran'ny lafiny ara-tsaina.
Ny kilasy efatra eritreritra dia avy amin'ny loharano roa: ny eritreritra izay avy any ivelany sy ny hevitra ao anatiny. Naseho ny fomba nivoahan'ny kilasy telo voalohany, tsy nanentana, namporisika ireo foibe misy azy ary niakatra teo amin'ny lohany. Ireo eritreritra rehetra ireo dia toy ny fitaovana sy sakafo izay miditra ao amin'ny kibo ara-tsaina, toy ny sakafo ara-batana ihany. Avy eo, ny sakafo ara-tsaina dia miampita amin'ny làlam-pandevonan-kanina izay mitovitovy amin'ilay lakandrano alimentary, izay iasan'ny taova ao an-doha manana fiasa mitovitovy amin'ireo any amin'ny faritra bevohoka sy pelvika. Ny cerebellum dia ny kibo ara-tsaina, ary ny fikaon-doha ao anaty lakandrano misy ny làlam-pandrefesana izay nampandehanana ny fomba fisainana, ao anaty fandevonan-kanina sy ny asim-bolo, alohan'ny handefasana azy avy amin'ny handrina, maso, sofina, orona, na vava. niforona tanteraka ho an'izao tontolo izao, amin'ny asany amin'ny tsara na ny ratsy. Koa ny fihetseham-po na eritreritra voaray amin'ny alàlan'ny afovoany telo ambany dia avy amina loharano ivelany ary mety ho sakafo ara-tsaina ho an'ny fakan-tsaina.
Ny eritreritra izay avy ao anaty dia avy ny ao am-po na ao an-doha. Raha ao am-po, dia fahazavana maharitra izany izay manome fitiavana tsy mifangaro amin'ny zavatra rehetra, fa izay mety ho lasa fitiavana ara-pihetseham-po ary miala amin'ny valin'ny antson'ny zanak'olombelona, ​​amin'ny alàlan'ny nono, raha tsy atsangana ho toy ny lelafo mamirifiry amin'ny lohany. Rehefa natsangana toy izany dia azo zahana, raisina ary voalanjalanja amin'ny alàlan'ny hetsika manerantany amin'ny eritreritra izay manazava ireo fizotran-tsaina dimy voalaza. Ny fiasan'ny sain'ny dimy dimy avy amin'ny saina amin'ny alàlan'ny saina dia ho hankasitrahana sy ho fantatra. Ny endrika eritreritra izay miainga ao an-doha dia mety ho lasa eritreritra satria miorina tanteraka tsy misy fomban'ny saina. Miaraka amin'ny fisehoany ao an-doha dia misy hetsika eo amin'ny faritra eo amin'ny fototry ny hazondamosina izay mahatonga ny loha ho feno hazavana. Ao amin'io hazavana io no takarina ny tontolon'ny eritreritra anatiny. Ny loharanon'ny eritreritra izay avy ao anaty dia ny herin'ny tsirairay na ny avo kokoa. Ny eritreritra toy izany dia azo antsoina amin'ny alalàn'ny olona tonga saina ary tonga amin'ny fahendrena. Ho an'ny hafa rehetra dia tsy ampoizina, amin'ny fisaintsainana lalina, na amin'ny faniriana fatratra.
Tsy eritreritra ny fisainana; tsy faniriana izany. Ny eritreritra dia ny hetsika mitambatra faniriana sy saina. Mety ho io no antsoina hoe saina ambany. Ny eritreritra dia vokatry ny fanirian'ny faniriana ao an-tsaina, na amin'ny fisainana amin'ny faniriana. Hevitra roa ny eritreritra; izay mifandray amin'ny faniriana sy ny sain'ny nofo, ny filana, ny filàna, ny faniriana, ary izay mifandray amin'ny saina amin'ny faniriany.
Ao amin'ny elo-manga manga miserana rahona tsy misy rahona no nifofofofona, ary niseho toy ny zavona matevina ny zavona. Avy amin'ireto, misy endrika mipoitra ary miha-mavesatra ary mihamainty mandra-pahazavana ny lanitra ary miposaka ny tara-masoandro. Rivo-doza, rahona sy endrika hafa dia very ao amin'ny haizina, potiky ny tselatra fotsiny. Raha mbola nitohy ny haizina nanan-kery dia niparitaka nanerana ny tany ny fahafatesana. Saingy maharitra mandrakizay ny hazavana noho ny haizina, ny rahona dia milatsaka orana, ny mazava indray mandroaka ny haizina ary ho hita ny vokatr'ilay tafiotra. Ny eritreritra dia vokarina amin'ny fomba mitovy rehefa misy faniriana mifandray amin'ny saina.
Ny sela tsirairay ao amin'ny vatana dia ahitana ny fitaovana sy ny mikraoba fisainana. Ny fahatsapana sy ny eritreritra ivelany dia raisina amin'ny alàlan'ny ivotoerana firaisana ara-nofo, ara-tsaina ary ara-pihetseham-po; fofona, tsiro, feo, loko, ary fahatsapana (hikasika), ampidiro ao anaty vatana amin'ny vavahadin-tsofina amin'ny alàlan'ny ivontoerana ara-tsaina dimy; ny saina dia misosa fombafomba, ary miaraka amin'ny fihetsiketsehana indroa amin'ny lafiny roa mifanohitra, amin'ny vatana manontolo, ary avy eo dia mifoha sy manafaka ny zavamiaina aina; Ny faniriana dia manome torolàlana mankany amin'ny fiainana izay miakatra amin'ny alàlan'ny fihetsehana toy ny vortex, mankamin'ny doka avy amin'ny lalany rehefa miakatra izy. Raha mieritreritra ny faniriana mafy, ny filàna, ary ny hatezerana, izay miditra amin'ny fidirana sy ny sazin'ny fo, dia miakatra ho any an-doha ny vahoaka be, masiaka, feno rahona, mety hampihemotra ny saina sy hanidy ny jiro. antony avy amin'ny fo. Ary avy eo ny rivotry ny firehetam-po, ny eritreritra manjombona tahaka ny tselatra, ary raha toa ny rivotry ny firehetam-po dia maharitra ny fahazavana jamba; raha mitohy adala na fahafatesana no vokany. Nefa toy ny amin'ny natiora, vetivety dia lany ny fahatezeran'ny rivo-doza toy izany ary ny vokatr'izany dia mety ho hita eo amin'ny sain'ny saina. Ny faniriana izay mahazo fidirana ao am-po - raha mararin'ny jamba izany dia mety ho resy - mipoitra amin'ny lelafo miendrika loko miloko isan-karazany ho any amin'ny tenda, avy eo mankany amin'ny cerebellum sy cerebrum izay ahazoany ny singa rehetra amin'ny heviny ao ny fizotry ny fandevonan-kanina, ny asidrôma, ny fanovana, ny fampandrosoana ary ny fiterahana. Ny foibe olfactory dia manome fofona sy fahatoniana azy, ny foiben'ny gustatory no mahatonga azy ho matevina sy mangidy na mamontsina ary mamy, ny foiben'ny auditory dia manolotra azy ho fanamarihana henjana na melodious, ny foibe ara-maso dia manome azy io ary manamboatra azy amin'ny hazavana sy ny loko. Ny foibem-pandrenesana dia manome izany fahatsapana sy fikasana ary izany no teraka avy amin'izao tontolo izao avy amin'ny ivon-dohan'ny làlana iray feno, ozona na fitahiana ho an'ny zanak'olombelona. Zanaky ny saina sy faniriana izany. Miankina amin'ny namorona azy ny tsingerin'ny fiainana. Avy aminy no itondrany ny fivelomany. Ny eritreritra izay tsy ahazoana sakafo sahaza mandritra ny fikarakarana ny gestation, na teraka aloha loatra, dia toy ny volondoha, na zavatra tsy misy aina, izay mikoropaka tsy misy hatak'andro mandra-pahatonga azy ho any amin'ny rivo-piainan'ny faniriana tsy azo antoka, handalo sy tahaka ny matoatoa amin'ny alàlan'ny trano tsy misy saina. Saingy ny eritreritra rehetra noforonin'ny saina iray dia zanaky ny saina, izay tompon'andraikitra amin'izy ireo. Manangona vondrona araka ny toetrany izy ireo ary mamaritra ny laharan'ny fiainan'ny Mpamorona azy. Toy ny zaza dia miverina manome sakafo ho an'ny ray aman-dreniny ny eritreritra. Ny fidirany amin'ny rivony dia manambara ny fisiany izy amin'ny fahatsapana mifanentana amin'ny toetrany ary mitaky ny fifantohana. Raha mandà tsy hankafy na hihaino ny fanambarany ny saina dia teren'ny lalàn'ny tsingerina hiainga mandra-pahafahan'ny famerenany. Ny vanim-potoana dia manary hery ary tsy dia miavaka amin'ny endrika misy azy. Fa raha manaja ny zanany ny saina, dia mijanona mandra-pahafahana sy mamelombelona ary avy eo, toy ny zaza izay nankasitraka ny faniriany, dia nihazakazaka hikambana amin'ireo namany ao amin'ny kilalao ary manome toerana ho an'ny mpangataka manaraka. Toy izany ny olona no iharan'ny sainy, izay manenjika azy mandritra ny androm-piainany, izay mamorona ny lanitra na ny afobe aorian'ny fahafatesana, izay manjary kristaly amin'ny endrika famoronana astral izay ahitana ny fironan'ny lasa tamin'ny lasa, izay namerenany indray, ary avy amin'izany ny masombin-tsaina taloha dia mamaka sy mibanjina ho fiainana ary mivoatra amin'ny fotoany sy ny tsingerin-taona.
Ny eritreritra dia tonga eo amin'ny sampana, amin'ny rahona. Ny fitsipiky ny mpitondra amin'ireo antokon-kintan'i zodiacal, mifandraika amin'ny fitsipika fito dia mamaritra ny fahatongavan'ny sainy, ary ny faran'ny tsingerin'izy ireo. Raha namelona eritreritra ny karazana sasany izy, amin'ny fiverenany aminy amin'ny fiainana aorian'ny fiainana, dia nohamafisiny tsara izy ireo, ary noho izany dia mihamalemy ny herin'ny fanoherana ny sainy sy ny atom-batany izy ireo. mandra-pahatongan'ny fisehon'ireo eritreritra ireo, ny fihetseham-po, ny fihetseham-po ary ny fahatsapana ananana, dia manana ny hery sy tsy azo ihodivirana amin'ny tsy ampoizina. Miangona, manamafy, manome kristaly ary manjary endrika ara-batana, fihetsika ary hetsika ny eritreritra, eo amin'ny fiainan'ny olona iray ary koa firenena iray. Dia tonga ny fironana tsy voafehy tampoka, hamono tena, mamono, mangalatra, manam-pitiavana, ary koa amin'ny fihetsika feno hatsaram-panahy sy fahafoizan-tena. Tonga ny alahelo tsy voafehy, ny rancor, ny lolompo, ny tsy fahatokisana, ny fisalasalana tsy fahatokisana sy tahotra. Toy izany ny fahatongavan'izao fahaterahana izao tontolo izao miaraka amina hatsaram-panahy, halala-tanana, fanesoana na fahatoniana ary ireo mifanohitra aminy.
Mihevitra ny olona ary ny voajanahary dia mamaly amin'ny alàlan'ny fizotran-kevitra tsy an-kijanona raha mijery azy izy ary manaja ny antony. Mihevitra ny olona amin'ny firehetam-po, fialonana sy fahatezerana ary fofona sy zavona miaraka amin'ny mpiara-belona aminy. Ny olona dia mieritreritra sy manapotika ny natiora araka ny fisainany, ary ny natiora dia miteraka ny maha-izy azy amin'ny endriny rehetra amin'ny maha-organik azy. Ny hazo, ny voninkazo, ny biby, ny biby mandady, ny vorona, dia amin'ny endriny ny fiakarana ny eritreriny, raha ny toetrany samy hafa dia sary sy fampahafantarana manokana ny faniriany manokana. Mamokatra araka ny karazany iray ny voajanahary, fa ny fisainan'ny olona no mamaritra ilay karazana, ary tsy miova afa-tsy amin'ny eritreriny ihany ilay karazana. Ny tigra, zanak'ondry, voromailala, boloky, ary voromailala, dia hanohy hatrany raha toa ka ny olon-drehetra no hampiavaka azy amin'ny toetran'ny heviny. Ireo orinasam-piainana miatrika fiainana amin'ny vatan'ny biby dia tsy maintsy manana ny toetrany sy ny endriny voafaritry ny fisainan'ny olona mandra-pisaina azy ireo. Amin'izay dia tsy mila ny fanampiany intsony izy ireo fa hanorina ny endriny manokana toa ny fanasan'ny olombelona ankehitriny ny fananganana azy sy ny azy.
Amin'ny maha-lemista, ny lehilahy dia mijoro amin'ny tontolo tsy mivelatra sy mahagaga. Amin'ny alalany no mampiavaka ny harena ho zavatra ara-panahy ary mivelatra eto amin'ity tontolo ara-batana ity ao anatin'ny toe-piainana fito manomboka amin'ny fanahy ka hatramin'ny olana. Amin'ny alàlan'ny olona izay mijoro eo afovoany, ireto toe-piainana fito ireto dia mirindra ary lasa zezika indray. Izy no mpandika izay manome endrika ny tsy hita rehefa mamela sy manamafy izany amin'ny alàlan'ny fisainana. Manova ny zavatra mafy orina ho tsy hita maso ary ho hita maso indray - hitan'ny eritreritra foana. Noho izany dia manohy amin'ny fizotrany izay fanovana sy fanadiovana, famoronana sy fanalefahana, famotehana sy fananganana vatany, ny tontolo biby sy legioma, ny toetoetran'ny firenena, ny faritra eran-tany, ny fanovana ny kontinanta, ny fahazazany sy ny taonany ary ny tanora mandritra ny tsingerin-taona - amin'ny saina foana. Ka amin'ny alàlan'ny fisainana dia manatanteraka ny anjarany amin'ny asa lehibe hanovana raharaha mandra-pahatongany ho fahatsiarovan-tena.